बारामा टोर्नाडो नै आएको जस्तो देखियो, विज्ञको अध्ययनले यस्तै भन्छ – MySansar
बारामा टोर्नाडो नै आएको जस्तो देखियो, विज्ञको अध्ययनले यस्तै भन्छ
मंगलबार माइसंसारमा ब्लग लेखेको थिएँ- त्यत्रो हेभी गाडी पल्टाउने गरी के भएको थियो बारामा? के त्यो टोर्नाडो थियो? शनिबार गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्राज्ञ तथा वरिष्ठ मौसमविद् मदनलाल श्रेष्ठसहितको एक टोलीले गरेको अध्ययनले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक टोर्नाडो आएको संकेत गरेको छ। समाचारमा त पुष्टि नै भएको भनिएको छ। तर थप जानकारी नआई त के पुष्टि भन्नु र। थप अध्ययन हुन बाँकी नै छ भनिएको छ।
सरकारले अनुरोध गरेमा त्यो तस्बिर निःशुल्क पनि प्राप्त गन सकिन्छ । एक मिटरको दूरीबाट खिचिएका ती तस्बिरले कसरी टोर्नाडोले क्षति ग¥यो भन्ने पूर्ण निक्र्योल हुनेछ । लगत्तै विभागले थप अध्ययनका लागि डा. अर्चना श्रेष्ठको नेतृत्वमा नामीहाङ किराँत, सुजन सुवेदी सहितको चार सदस्यीय एक टोली बारा र पर्सा पठाएको छ ।
फोटो र भिडियोहरुमा देखिएको क्षति अनुसार EF-1 वा EF-2 को स्तरको टोर्नाडो देखिन्छ।
टोर्नाडो कस्तो हुन्छ त? अरु देशको भिडियो हेरौँ
अरु देशमा आएको फोटो हेरौँ
नेपालको यस्तो फोटो र भिडियो हेर्न पाइएको छैन। यो आएको नै राति थियो। आइतबार राति पौने ८ बजेदेखि सवा ८ बजेसम्म यो आएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। स्याटेलाइटको फोटोमा टोर्नाडोले जस्तै उसको बाटोमा भएका संरचना ध्वस्त पारेको देखिएको छ